SAMBAVA : Mangana ny lamosiny, vaky ny lohany, tapaka ny lakatom-ban’ilay lehilahy maty tao anaty violon
Tavela resabe ao Sambava ny fahafatesan’ilay lehilahy tao anaty violon, ny farany herinadro lasa izay. 1er octobre 2018
Tsiahivina fa tratran’ ireo zandary nanao fisafoana tamin’ny alina na mpanao "couvre feu" ny alakamisy 20 kiaka zoma 21 septambra ilay raim-pianakaviana. Nisy araka izany ny fampilazana tamin’ireo havany ny mba hanaterana sakafo sy lamba ho azy. Mbola nahita azy salama tsy narary ireo havany tamin’io andro zoma io. Fa ny sabotsy 22 septambra tontolo andro dia tsy nahita maso azy fa ny sakafo ihany no naterina. Ny alahady maraina ny 23 septambra dia ny filazana azy fa maty no nataon’ireo avy tamin’ny zandary, ka nanaitra ireo fianakaviany. Tamin’ny fanasana ny razana no nahitana fa misy mangana tao an-damosiny ary tapaka ny lakatom-bavany, vaky ny lohany. Nihevitra araka izany ireo havany fa noho ny daroka nahazo azy no nitarika ny fahafatesany.
Manoloana ny zava-misy dia nilaza ireo avy amin’ny zandary fa efa nahita azy nitsirara teo amin’ny tany ary nisy lehilahy iray hafa voatazona ihany koa no nitaingina teo amboniny. Ireto zandary dia milaza fa ireo samy ireo tao ihany no nifamono. Raha izany no tranga nisy, taiza ireo mpiambina ka tsy nahare ny fifamonoan’ireo samy voatazona ? Amin’ireo fianakaviany dia ny zandary no tompon’antoka tamin’ny fahafatesan’ity raim-pianakaviana namela kamboty roa mirahalahy ,5 sy 7 taona ity. Araka izany dia nametraka fitoriana any amin’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria ireo fianakaviana, mba hahalalana ny marina.
Araka ny fampitam-baovao hatrany fa nanolotra 2 hetsy Ariary ny lehiben’ ny zandary ao Sambava ho famafana ny ranomason’ny velona, nefa nolavin’ireo fianakavian’ ny maty izany. Mampiahiahy ny mpanara-baovao ao Sambava ny zava-misy ary nampahatsiahy ilay zalahy tafatsoaka ny violon volana vitsy lasa izay tao Sambava, ka hita faty taorian’ny andro vitsy nahavotsotra azy. Amin’ny ankapobeny dia lasa mampiahiahy ny mponin’i Sambava ny zandary. Lasa nifanohitra ny rasa, ka lasa ireo dahalo tsy voasambotra fa izay tara fodiana variana nisotro toaka no maty voavono ao anaty violon.